AirCord, fitaovana iray hafa hiarovana ny AirPods anao tsy hianjera | Avy amin'ny mac aho
Ankehitriny toa toa mihaona ny fahatongavan'ilay AirPods ho an'ny taranaka faharoa, dia afaka mifarana anio isika miaraka amin'ny fitaovana fanampiny ho an'ireo mpankafy izay mieritreritra ny hividy iray amin'ireo zava-mahatalanjona an-telefaona ireo.
Io ny AirCord, fitaovana fanampiny ahafahanao manana AirPods mifandray ka raha sanatria mivoaka eo an-tsofinao io dia tsy mianjera amin'ny tany ary afaka mamoy azy tsy nahy ianao.
Apple dia manohy mandalina ny mety ho fanatsarana mba hampidirina ao amin'ny AirPod vaovao na dia zavatra iray aza azontsika mazava ary ny endrik'izy ireo dia hitovy ary ny fanatsarana dia ho tonga eo ambanin'ny lamba, izany hoe, ao anatin'ny trano AirPods manomboka amin'ny ny fitoeran-kaontenera. Raha ny momba ny fitoeran-kaontenera dia efa fantatray izany dia ho avy miaraka amin'ny teknolojia famandrihana tsy misy tariby, satria tsy fantatra ny fanatsarana izay ho entin'ireo headphone, fantany fotsiny fa mety ho mahatohitra rano izy ireo ary hifandray amin'ny farany, miaraka amin'ny "Hey Siri".
Eny, na efa manana AirPods ianao na raha mieritreritra ny hahazo azy ireo dia manolotra an'ity safidy lanyard ity izahay hahafahanao mampiditra azy ireo ary mampiasa azy ireo nefa tsy mila refesina ny fahavoazany. Ny vidin'ny AirCord dia 14,99 euros ary azonao atao ny mampiditra azy ireo ao amin'ny rohy manaraka izay hahafahanao mianatra bebe kokoa momba azy ireo ary koa mahita ny hevitr'ireo mpampiasa efa nividy azy ireo.
Eo amin'ny tsena dia misy safidy hafa amin'ity fomba ity ary ato amin'ity bilaogy ity dia nasehonay anao ny safidy hafa vita amin'ny fluoroelastomer, fa amin'ity tranga ity dia fitaovana fanampiny vita amin'ny fluoroelastomer rakotra fitaovana lamba, izay manome endrika premium kokoa azy. Hita amin'ny loko dimy samihafa izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » AirCord, fitaovana iray hafa hiarovana ny AirPods anao tsy hianjera
Christian Contreras dia hoy izy:
Valiny tamin'i Cristian Contreras
Fanavaozana ny rafitra amin'ny Mac, indraindray zavatra tsy ilaina